Hevitra MPANOHARIANA | Febroary 2010 |
2010-02-16 @ 23:01 in Finoana
Nisy nametraka ny lohateny ho teny tarigetra, nisy kosa ny nanao azy ho tenim-panesoana. Olombelona va no hiankinana? Ny an'ny mpino dia Andriamanitra ihany no fiantehitra. Efa herintaona mahery izay no nanao sangodim-panina teto ny tontolom-bolongana Malagasy ary misy aza ireo mpiray tanindrazana no milaza fa leo sy boboky ny lohahevitra #madagascar mandeha any amin'ny valan-tserasera any. Misy ny namana no manambara fa toa fanasana atidoha no tena betsaka amin'io lohahevitra io, mibahan-toerana manko ny resaka politika. Samy manana ny vaindohan-draharahany ny tsirairay, ary mariky ny fahafahana izany, ka tsy tokony hisy ny hanome tsiny amin'izay safidy zon'ny tsirairay. Samy te-hampandroso an'ity Madagasikara ity ny tsirairay fa ny lasitra iaingana no tsy itovizan-kevitra amin'ny ankapobeny.
Efa ela aho no te-hamoaka lahatsoratra fa dia tahaka ny misy hatrany ny sakana sy ny sampona isan-karazany. Fikirizana sy fifantohana lehibe noho izany vao mahatafavoaka izany lahatsoratra iray izany. Hamoaka sy hamehy araka izay azoko atao ity nodinihako toa mifandraika amin'ny zava-misy eto Madagasikara ity aho satria tsy ady amin'ny alalan'ny hery sy ny saina no tena lehibe eto, araka ny fijeriko, fa ady ara-panahy indrindra indrindra. Izay no maharesy lahatra ahy fa lalam-paharesena ho antsika mpandala ny ara-dalàna izany lalana mampiasa hery sy tafika ary fitaovam-piadiana izany. Lasa mampiditra adihevitra sahady indray aho nefa tsy dia any loatra no foto-dahatsoratra. Indro ary ireo karazam-pahazavana azoko nandritra ny fifadian-kanina nataoko tamin'ny Asabotsy 30 janoary izay niraisana tamin'ireo nanatrika ny Hetsika Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara nanerana an'i Madagasikara.
Ny fanazavan-kevitra apetrako dia miainga amin'izay hita ao amin'ny Filazantsaran'i Marka 9 : 14 - 29 izay azonao vakiana soa aman-tsara na tsy averiko etoana aza. Toy izao manaraka izao no tsipalotro :
1 _ Raha tonga Jesoa dia olona niady hevitra tamin'ny mpianany [mpanara-dia azy] no hitany fa tsy nisy resaka fihainoana na endrika fotoam-pivavahana na asam-panafahana [asam-panasitranana]. Fanaontsika mihitsy io indrindra amin'izao vanim- potoanan'ny fahalalahana izao, ary tsy misy antony mahadiso izany araka ny eritreritsika. Saingy izao, very andro fotsiny isika ary mandany fotoana izay mety ho sarobidy dia sarobidy amintsika. Mety hiainga ao anatin'izany adihevitra izany ny filazana hoe fandaniam-potoana fotsiny izany fivavahana izany fa tsy misy asany akory. Tsy hoe tsy nahavita nanasitrana ilay azom-panahy moana ny mpianatra dia tsy izy izay fivavahana nataony sy ny iraka nampanaovina azy fa ilay finoana no adino na ny eritreritr'izay tokony hanasitrana ihany koa no mety manao sahady any am-pony any hoe ho voavaha ve ity olana ity? Tsy nahagaga i Jesoa raha nanondro izay teo ho "taranaka tsy mino".
2 _ Toa tena aretina sarotra afaka [na olana saro-bahana] tokoa ity natrehina ary rehefa natao teo anoloan'i Jesoa ilay marary dia indro fa maneho ny heriny indray ilay krizy ary tena nanao izay hampitsikasikasina ilay olona sy hahatrotraka dia trotraka azy. Matetika ny olona no kivy ambony ihany raha vao miatrika ny hitany sy mahita ny herin'ilay olana atrehiny, manjera azy anaty afo sy manempotra azy any anaty rano hoe? Soa ihany fa tsy ny hijery ny hasarotan'ny olana na ny halehiben'ny aretina na ny herin'ny fanahy maloto no nahatongavan'i Jesoa teo amin'io fotoana io fa ny hanafaka ilay olona azom-pahoriana sy gejain'ny fanahy ratsy mamehy ilay olona ho moana tsy afa-miteny.
3 _ Ny zavatra rehetra dia hain'ny mino : Matetika ny mpino dia heverina ho olona badobado na vendrambendrana. Betsaka ihany koa ireo olona no mampifanohitra ny finoana sy ny fahalalàna na fahaizana. Mahay miaraka tsara ny finoana sy ny fahaizana na dia natao matetika aza izay hampifandrafy azy. Afaka mifampisedra tsara anefa ny roa tonta fa ny hafatra mipetraka eto dia hoe "hay avokoa ny zavatra rehetra..." eny fa na dia ny heverina ho tsy azo tanterahina araka ny takatry ny sain'olombelona amin'iny vanim-potoana iny aza (impossible). Tsy tokony hitarika ny olona hanaotao foana na handositra sy tsy hanaiky ny zavamisy izany fa hisedra amim-pitokiana ny zava-tsarotra hodiavina rehetra.
4 _ Niteny tamim-pahefana ny fanahy moana sy marenina ny Tompo, tsy ilay fantatry ny olona hoe "moana" ihany no nobaikoana fa nitenenany ihany koa ilay "marenina". Sakana eo amin'ny fifampitan-kafatra izany fahasembanana eo amin'ny fihainoana na fitenenana saingy tsy nahasakana ny Tompo tsy hiteny izany. Fahadalàna ve no nataony mbola hiteny na dia lazaina fa marenina aza ilay nitenenana? Misy ny fombam-pitenenana manao hoe tsy misy marenina tahaka ny minia tsy te-hihaino. Mampitodika amin'ny zava-misy atrehina izy ity. Impiry impiry no niantsoantsoana olona hanao izatsy na izaroa nefa toa zary fandrangitana sy manao izay hahatezitra no setriny. Mety hanao hoe tsy ampy fahefana angaha ny mpiantso ka izany no tsy iraharahian'izay itenenana? Na izany aza nanaraka ny baiko nolazain'i Jesoa ihany ilay fanahy ninia nanentsi-tadìny ka afaka tery ilay olona voageja teo.
5 _ Amin'ny fotoana na fihetsika tsy ampoizina indrindra no nisian'ny famonjena ilay olona. Noheverina fa toa hanohitra araka izay tratry ny heriny no nataon'ilay fanahy maloto hay tsipaky ny miala aina araka ny filazan'ny olona. Noheverina fa tsy ho afa-misaraka intsony ilay olona sy ilay fanahy, rehefa nialan'ilay fanahy ilay olona dia tsy nihetsika intsony ka nampihoraka ny mpanatrika hoe "Maty". Saingy noraisin'i Jesoa ny tanan'ilay olona ary dia nitsangana. Mety hisy ny hihevitra fa rehefa tsy mahahetsika intsony ny olona rehefa nampijaliana nandritra ny fotoana maharitra dia izay no izy. Tsia! mbola eo ny tanan'ny Tompo hampitsagana azy azy haneho azy amin'iny olona hoe mbola velona. Fa izao anefa no tsarovy : rehefa nanontanian'ny mpianatra mangingina ny Tompo dia hoy ny navaliny hoe tsy misy fanafana ankoatra ny Fivavahana sy ny fifadian-kanina rehefa amin'ny karazany toy izany.
Koa ho an'ny mpino te-hanala ny tsy fifampihainoana manjaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Indro fa natoro anao ny lalana ivoahana amin'izao krizy izao. Nisy ireo nanentana ny olona hanao androm-pibebahana sy vavaka fifadian-kanina mandritra ny tontolo andron'ny 18 febroary 2010 ho avy izao izay mifanandrify indrindra amin'ny fihaonana hamahana ny krizy manjaka eto Madagasikara. Mahavariana fa na dia andro hafa aza no nokasain'ny mpikarakara hanaovana io dinika io dia nanjary nitontona tamin'ny androm-panentanana hanaovana izany vavaka fifadian-kanina sy fibebahana izany. Izaho manokana, tsy tereko velively ianao hitovy hevitra amiko, dia mahita izany ho asan-tanan'Andriamanitra hohararaotintsika Malagasy hanatanteraka ny fihetsika mialoha ny hanaovana tenim-pahefana handroahana ny fanahy maloto ho any an-davaky ny helo, koa atokany ny fotoananao amin'io andro iray io. Tsy adihevitra intsony no hapetraka fa ilay lohateny hoe "Minoa fotsiny ihany" fa dia ho fandaniam-potoana tokoa raha hanao ihany ianao neefa tsy hino ilay valim-bavaka hamoahana ity Madagasikara malalantsika ity hiala amin'ny kizo.
Jentilisa 17 febroary 2010 amin'ny 01:05